मिति २०७४ असार १५ गते
स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन पनि हिजो आषाढ १४ गते सामान्यतः शान्तिपूर्ण र व्यापक जनसहभागिताका साथ सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनलाई सफल पार्न योगदान गर्ने सबै जनसमुदाय, पार्टीका कार्यकर्ता, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सरकार, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, अनुगमन गर्ने संघ संस्था तथा स्वयंसेवकहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छौं ।
नया“ संविधान कार्यान्वयन गर्न र लामो समयदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अति आवश्यक भएको थियो । हामीले यो निर्वाचन गर्न पहिलेदेखि धेरै जोडदिंदै आएका थियौं । मधेशवादी दल राजपाले संविधान संशोधन नगरेसम्म चुनाव हुन नदिने नीति लियो र पटक–पटक चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । त्यसमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि मतियार बन्दै र त्यसमा सम्झौतागर्दै गयो । विशेष गरी प्रतिपक्षी दलहरु र जनताको संघर्ष र दवावका कारणले यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । हामीले त्यतिबेलैदेखि भन्दै आएका थियौं कि तात्कालिन मधेशवादी दलहरुका नीतिहरु सही छैनन्, सरकारले संविधान संशोधन गर्न पेश गरेको विधेयक राष्ट्रघाति छ, मधेशका जनता त्यसको पक्षमा छैनन् । त्यसकारण उनीहरुका कारणले निर्वाचन स्थगित गर्ने वा चरण–चरणमा निर्वाचन गर्नु सही हु“दैन । राजपाले निर्वाचन बहिष्कार गरे पनि मधेशका जनता झन बढी उत्साहकासाथ ठूलो संख्यामा मतदानमा सहभागी भए । यो अत्यन्त राम्रो पक्ष हो । यसले हाम्रा भनाइहरु सही सवित भएका छन् ।
निर्वाचनको मिति पटक पटक सार्ने, दुई–तीन चरण गरेर निर्वाचन गर्ने र २ नं. प्रदेशको निर्वाचन आश्विनमा पु¥याउने कुरा सही थिएनन् र छैनन् । दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि मध्य वर्षाकालमा पारेर जनताले दुःख पाए । २ नं. प्रदेशको निर्वाचनलाई सरकार र राजपाले जुन कारणले पछि सारेका छन्, त्यो पनि सही छैन । दोस्रो चरणको निर्वाचनको सफलताले सरकार र राजपाका मान्यता र संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गर्न नदिने षडयन्त्रको पर्दाफास भएको छ । अब उनीहरुले संविधान संशोधनको राष्ट्रघाति खेल पनि बन्द गर्नु पर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन व्यापक जनसहभागिता साथ शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनुले आगामी माघभित्र प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्न पनि निर्देश गरेको छ ।